သကြားလုံး Crush အဆင့် 677 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ - Candy Crush ဂိမ်း - အခမဲ့ဘဝပုံစံများသိကောင်းစရာများအရိပ်အမြွက်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် / အမျိုးအစား / သကြားလုံး Crush အဆင့် 677 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ ဇူလိုင်လ 12, 2021 အားဖြင့် Isobella ဖရန့် Comment တစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပါ။
Maslow ၏ လိုအပ်ချက်များ၏ အထက်တန်းအဆင့်သည် လူသားတစ်ဦး၏ ကွဲပြားခြားနားသော လိုအပ်ချက်အဆင့်များကို ရှင်းလင်းစွာ ရှင်းပြသည်။. ဤလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် လူသားများ လိုအပ်နေသည့် အမိန့်ကိုလည်း ရှင်းပြထားသည်။. ဤလိုအပ်ချက်များသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သည်။, လုံခြုံရေး, လူမှုရေး, အတ္တ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားမှု. Candy Crush သည် ယနေ့ခေတ်အမျိုးသားများသိသည့် အဆင့်အမြင့်မားဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် သင့်လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. Candy Crush သည် သင့်အား ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ယှဉ်ပြိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။. လူတွေက ဂိမ်းထဲမှာ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံတကာ ရပ်တည်မှုကို သိကြပါတယ်။. ထို့အပြင်, ၎င်းသည် သင့်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို ထုတ်ပေးပြီး လူတစ်ဦးအဖြစ် ကြီးထွားလာစေရန် ကူညီပေးသည်။. သူတို့သည် ဤနေရာတွင် သင်ယူပြီး လက်တွေ့ဘဝတွင် အသုံးချနိုင်သော စရိုက်လက္ခဏာများကို လေ့ကျင့်ကြသည်။.
အသုံးပြုသူများသည် ပိုင်ဆိုင်ရာသဘောကို ရရှိကြသည်။, နိုင်ငံတကာ ရပ်တည်မှု နဲ့ မတူညီတဲ့ အလုပ်တွေ နဲ့ အတူ ဆက်ပြီး ကြိုးစားချင်စိတ် ဖြစ်စေပါတယ်။, အဖန်ဖန်, အားကစားသမားများကို တည်ဆောက်ခြင်းသည် သင့်အတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်ကို ပို့ဆောင်ပေးပြီး သင့်အား ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေသည့် ခံစားချက်ကို ပေးသည်။. ဂိမ်းအတွင်း အောင်မြင်မှုနှင့် ကျရှုံးမှု နှစ်ရပ်လုံးကို ရယူနိုင်ရန် ဤအချက်သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။, ဒါပေမယ့် ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုရဲ့ ခံစားချက်အနည်းငယ်ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အား ပေးစွမ်းရန် ဤနေရာတွင် ရှိနေပါသည်။ သကြားလုံး Crush အဆင့် 677 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ.
ဤအဆင့်၏အမိန့်ကိုရရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။ 10 အစင်းကြောင်းသကြားလုံးများနှင့် ဆွတ်ထားသောသကြားလုံးများ. ဒါကိုလုပ်ရင်းနဲ့ အနည်းဆုံးတော့ ဂိုးသွင်းရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ 20,000 အမှတ်ရပြီး ဒါက အဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။, ဒါတွေအားလုံးကို အတိုချုံးပြီး လုပ်ရမယ်။ 35 ခြေလှမ်းများ. သင်၏ရွေ့လျားမှုကန့်သတ်ချက်ထက် မကျော်လွန်ဘဲ အဆင့်၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်, သင်အဆင့်တွင်အောင်မြင်လိမ့်မည်။. လွယ်ပုံရသည်။, မဟုတ်ဘူးလား။? ကောင်းပြီ, ပုံမှန်ကစားသမားတစ်ဦးသည် ၎င်းသည် နာရီပေါင်းများစွာ စီစဉ်ပြီး ကြိုးစားရမည်ကို သိသည်။, ကျရှုံးမှုတွေ အများကြီးပါ။, you will win by chance. သို့သျောလညျး, မင်းရဲ့အနိုင်ရရှိမှုနဲ့အတူ ငါတို့က မင်းကို ကူညီပေးနေတယ်။ သကြားလုံး Crush အဆင့် 677 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ ဤအဆင့်ကို ဖြိုခွဲပြီး Candy Crush Saga နယ်မြေတွင် သင်၏ခရီးကို ဆက်လုပ်ပါ။!
Candy Crush အဆင့် 677 လှည့်စားမှုများနှင့် အကြံပြုချက်များ
အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ Candy Crush အဆင့် 677 လှည့်စားမှုများနှင့် အကြံပြုချက်များ သင်၏ Candy Crush Saga ခရီးကို ပိုမိုလွယ်ကူပြီး ပျော်စရာကောင်းစေရန်:
ဤအဆင့်၏အဓိကအတားအဆီးမှာ Loco rise Xs သည်သင်၏ချွတ်ထားသောသကြားလုံးများကိုပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။. အချိန်မဖြုန်းဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။, သို့မဟုတ် ရွှေ့သည်။, အနည်းငယ် meringues ပေါ်တွင်. သင်သည် Licorice ကို ဘယ်ညာ ဖယ်ရှားပြီး အဆိုပါ အစင်းကြောင်းသကြားလုံးများကို စတင်စုဆောင်းပြီး သင့်ပန်းတိုင်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရပါမည်။.
Obsession with anything is bad. Especially, ဂိမ်းထဲမှာ အမြဲပေါ်လာတဲ့ ချိန်ကိုက်ဗုံးတွေအကြောင်း ပြောရင် မကောင်းပါဘူး။. သူတို့ကို ဖိအားမပေးပါနဲ့။. အမှန်တကယ်, ၎င်းသည် အတားအဆီး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။. Just go with it, အဲဒါတွေကို ပညာရှိရှိ အသုံးချပါ။. ထို့အပြင်, သူတို့ကို မတူညီတဲ့ combo တွေမှာ ထည့်လိုက်ပါ။, မသက်ဆိုင်သော သကြားလုံးများကို တတ်နိုင်သမျှ ထုတ်ယူပါ။.
သင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းစွမ်းရည်ကို အသုံးပြုပါ။, သင်၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်အချိန်ကိုခွဲပါ။. ပျမ်းမျှအားဖြင့်, 3rd လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတွင် အစင်းလိုက် သကြားလုံးတစ်လုံးရသင့်သည်။, ယခု ဤအရာသည် သင်၏ အနိမ့်ဆုံး ရည်မှန်းချက် ဖြစ်သင့်သည်။. အနိုင်ရရန် ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးမြှင့်ရန်: ဘုတ်၏အောက်ပိုင်းဒေသမှ ပိတ်ဆို့မှုများကို ဖယ်ရှားရန် ကြိုးစားပါ။. Hence this would startachain reaction resulting inahigher probability of getting combinations of striped candies.